ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုက cookie တစ်ခုစီတိုင်းကိုတိုင်းက new ည့်သည်အသစ်အဖြစ်မှတ်သားသည်။ သငျသညျပြန်လာတဲ့အခါ, သူတို့ကသင်ရှိပြီးသားကြောင်းကိုတွေ့မြင်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူကွဲပြားစုံလင်သောအားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်:
IndyStar.com သတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်အင်ဒီယားနား၏နံပါတ် ၁ အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာသန်း ၃၀ ကျော်ကြည့်ရှုသည်။ ၂.၄ သန်းထူးခြားသော visitors ည့်သည်များ နှင့် 4.7 သန်းတစ်လလည်ပတ်။
comScore US home နမူနာကိုအခြေခံအနေဖြင့် Yahoo အတွက်ကွန်ပျူတာတစ်ခုလျှင်ပျမ်းမျှ ၂.၅ ကွဲပြားသော cookies များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီတွေ့ရှိချက်က cookie ကိုဖျက်ခြင်းကြောင့် site-visitor base ၏အရွယ်အစားကိုတိုင်းတာရန် cookies များကိုအသုံးပြုသော server ဗဟိုပြုတိုင်းတာခြင်းစနစ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထူးခြားသော visitors ည့်သည်အရေအတွက်ကို ၂.၅x အထိတိုးလာလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ အထိ 2.5 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခု overstatement ။ အလားတူစွာ၊ လေ့လာမှုအရအွန်လိုင်းကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ရောက်ရှိမှုနှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုခြေရာခံရန် cookies များကိုသုံးသောကြော်ငြာဆာဗာစနစ်သည် ၂.၆ ဆအထိအချက်တစ်ချက်နှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုတူညီသောအတိုင်းအတာအထိလျှော့ချနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အလွန်အမင်းဖော်ပြသည့်ပမာဏ၏ပမာဏသည်ဆိုက်သို့အလည်အပတ်ရောက်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်ကင်ပိန်းနှင့်ထိတွေ့မှုတို့ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဖြစ်နိုင်စရာ! ဒေသခံသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကဲ့သို့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုယူပါ။ ထိုအရေအတွက်သည် ၂.၄ သန်းသည် visitors ည့်သည်တစ်သန်းအောက်ရောက်သွားသည်။ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဆိုသည်မှာမကြာခဏ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုရသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပြီးထိုနံပါတ်သည်ထိုထက်နည်းနိုင်သည်။ ယခုဆိုလျှင်အိမ်တွင်နှင့်အလုပ်ခွင်သို့ ၀ င်ရောက်လာသောစာဖတ်သူ ဦး ရေကိုထည့်ပါ။ သင်သည်ထိုနံပါတ်ကိုအခြားသိသာထင်ရှားသည့်ပမာဏကိုကျဆင်းသွားစေသည်။
၎င်းသည် 'မျက်ခုံးဟောင်းအစုအဝေး' အတွက်ပြisနာဖြစ်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းကိုနံပါတ်များဖြင့်အမြဲရောင်းနေစဉ်၊ သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်မီဒီယာများထက် visitors ည့်သည်အရေအတွက်များပြားလာနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ပြtheနာကို 'ဖြေရှင်းရန်' ကိုမှန်ကန်နည်းလမ်းမရှိ။ ဦး နှောက်တစ်ဝက်ပါသောမည်သည့် ၀ က်ဘ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကဤကဲ့သို့သောအရာဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဆိုဒ်များကို၎င်းတို့၏နံပါတ်များကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအလွန်အကျွံဖော်ပြနေသည်ဟုမပြောပါ။ သူတို့ဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုမဖော်ပြကြပါဘူး။ အလွန်စိတ်မချရသောဖြစ်ရပ်မှန်များ။
8:2007 pm မှာဇွန် 1, 48
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အနာဂတ်၌ CardSpace ၏လိုင်းများတလျှောက်တစ်ခုခုဒီပြproblemနာကိုထွန်းလင်းလိမ့်မယ်။ သို့သော်၎င်းသည် Big Brother ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
8:2007 pm မှာဇွန် 8, 32
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ထူးခြားသည့် visitors ည့်သည်များအားဆုံးဖြတ်ရန်တိကျသောနည်းလမ်းမရှိပါ။
cookies များသည်စိတ်မချရသောကြောင့်လူအများအပြားသည် client side storage အတွက် flash ကိုအသုံးပြုနေကြသည်။
သို့သော်ကြော်ငြာသူများအတွက်၊ စာမျက်နှာကြည့်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ ကြော်ငြာတစ်ခုပြသည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကိုတိကျစွာဆုံးဖြတ်ရန်လွယ်ကူသည်
ပြီးတော့ ၀ က်ဘ်စာရင်းအင်း ၀ န်ဆောင်မှုတော်တော်များများမှာကိုယ်ပိုင်ပြproblemနာရှိနေတယ်။ statcounter ကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်စာရင်းအင်းဆိုက်သည်တစ်ကြိမ်လျှင်သုံးစွဲသူအကန့်အသတ်ဖြင့်သာထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
ဂူဂဲလ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဤအချက်မှာများစွာပိုကောင်းသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာရရှိရန် ၂ ရက်လောက်စောင့်ရမည်
Yahoo! အတွက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလျှင်ပျမ်းမျှ cookies ၂.၅ မျိုးတွေ့ရသည်။
အိမ်သုံးကွန်ပျူတာတစ်လုံးလျှင် Yahoo သုံးစွဲသူမည်မျှရှိသနည်း။ ဟုတ်တယ်၊ ၂ သို့မဟုတ် ၃ လောက်လောက်ရှိတယ်။ ငါဟာ Yahoo, Google, Schwab ဒါမှမဟုတ်တခြား site တွေမှာလားငါ့အကောင့်ကိုစစ်ကြည့်လို့ရတယ်။
ငါတို့အိမ်မှာလူကြီး ၂ ယောက်ကြားမှာငါတို့မှာကွန်ပျူတာ ၄ လုံးနဲ့ Mac တွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင့်မှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိသလား၊
သင့်တွင် reg site တစ်ခုရှိပြီးသင်၏ဆာဗာမှတ်တမ်းများကအဆင်သင့်ရှိပါက IP address တစ်ခုစီအတွက်နာမည်များကိုဖော်ပြပါ။ (ဒီအချက်ကကွန်ပျူတာဘယ်လောက်များများ share လုပ်တယ် / dup အကောင့်တွေရှိတယ်ဆိုတာပြတယ်) ထို့နောက်အမည်တစ်ခုစီပေါ်ပေါက်လာသည့် IP မည်မျှပြသမည်ကိုအစီရင်ခံစာတင်ပါ။ (ဤပြသမှုကပြသည်) ips သည် isps နှင့်bကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည်။ သုံးစွဲသူများသည်နေရာများစွာမှဝင်ရောက်ကြသည်။ )
ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ 2.5 နံပါတ်ကမှန်ပါတယ်။ မဟုတ်လိမ်လည်မဟုတ်, အလွန်အကျွံမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာပုံပြင်မရှိဘူး ယခုတစ်လျှောက်ရွှေ့ပါ။
ရေးသားထားသောဆောင်းပါးသည်ကွတ်ကီးများနှင့် ပတ်သက်၍ login / logout ပြissuesနာများကိုဆွေးနွေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ cookie အကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ ဖျက်သည် နှင့်ထူးခြားသော pageviews အပေါ်သက်ရောက်မှု။ Yahoo! သင် logout လုပ်ပြီး login လုပ်တဲ့အခါမှာ cookies တွေကိုမဖျက်ပါဘူး။
ပြofနာမှာအိမ်ထောင်စုများ၏ ၃၀% ကျော်သည်သူတို့၏ကွတ်ကီးများကိုဖျက်ပစ်ခြင်းကြောင့်သင်သည် visit ည့်သည်အသစ်အဖြစ်မြင်ရသည်။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောရှင်းပြချက်အတွက်ဆောင်းပါးကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပါ။
သင်၏ပုံဥပမာသည်ကျွန်ုပ်တင်သည့်နေရာတွင်လူအများအပြားတို့သည်စက်အမျိုးမျိုးမှတူညီသော site ကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ လူကြီး ၂ ဦး အကြား PC များနှင့် Mac များရှိပါကသင်သည်စက်အားလုံးပေါ်တွင် site တစ်ခုတည်းကိုလည်ပတ်ပါက ၂.၅ မဟုတ်ဘဲ 'ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များ' အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လူ ဦး ရေ၏ ၃၀% + ကဲ့သို့ cookies များကိုပုံမှန်ဖျက်နေလျှင်၎င်းသည်ထူးခြားသော visitors ည့်သည် ၁၂.၅ ဦး ကျော်သွားသည်။
ဆောင်းပါးနှင့်သင့်တုံ့ပြန်မှုကိုပြန်လည်ဖတ်ပါ။သင်မှန်ပါတယ်။ ငါမူလကသင်၏အမှတ်နားလည်မှုလွဲ။ ရှင်းလင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါ့အပြင် gautam ကမှန်ပါတယ်၊ flash ကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်မရှိသည့်တိုင်လူအများက flash cookies များကိုအသုံးပြုနေကြသည်။ ညစ်ပတ်ပေရေလျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်ချက် - သင်၏ flash တွင်သတ်မှတ်ထားသော cookies များကိုသင် (အလွယ်တကူ) မဖျက်နိုင်ပါ။
(ဂူးဂဲလ်ရဲ့ flash ကအများကြီးမလုံလောက်ဘူး။ DoubleClick က…)